Kedu ka ị ga - esi mee ka usoro ahụ gị si alụ ọgụ? - Afrikhepri Foundation
Wenezdee, Ọgọst 4, 2021
Kwalite usoro ntinye
Na-agụ: 22 mins
Lusoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-arụ ọrụ abụọ dị mkpa n'ime ahụ.
Nke mbụ, ọ na-emetụta ahụ ndị mba ọzọ site na ịmepụta ihe ndị na-alụso ọrịa ọgụ ma na-akpali mkpụrụ ndụ pụrụ iche nke na-ebibi ihe ndị a ma ọ bụ na-egbochi ọgwụ ndị na-egbu egbu ha. Nke a bụ ụzọ ọ na-esi chebe anyị megide ndị mwakpo ndị a si mba ọzọ, ya bụ nje, nje, nje na ihe ndị ọzọ. Mgbe ahụ, ọ na-eche nche maka sel nke ahụ iji jide n'aka na ha adịghị njọ ma ọ bụ na ha adịghị mma.
Usoro mgbochi gị
N'ọtụtụ ụzọ, usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ bụ usoro kasị dị egwu nke ahụ, na-esiri ụbụrụ na-arụ ụka, na mgbagwoju anya, aghụghọ, na "ịmara onwe onye." Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ihe usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-eme:
• Ọrịa gị na-ahụ maka ọnyá nwere ike ịchọpụta sel ọ bụla n'ime ahụ ma chọpụta onye ọbụla dị ka enyi.
• Na-emegharị ahụ, ọ na-enwe ike ịbọrọ ma mata ndị mwakpo si mba ọzọ, bụrụ nje bacteria, nje, fungi ma ọ bụ nje.
• Ozugbo a chọpụtala onye na-awakpo gị, usoro ihe mgbochi gị na-amalite ngwa ngwa iji chebe onwe ya nke na-eme ka onye na-ebuso onye ahụ agha ghara ịma ya.
• Mgbe ahụ, ọ ka mma. Mgbe ị na-achọpụta ngwá agha a chọrọ, usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ amalite ịmepụta ụlọ ọrụ na-arụpụta ngwá agha ndị a dị iche iche iji kwatuo onye ahụ mwakpo ahụ.
Akụkụ nke usoro ahụ adịghị
Mkpụrụ ndụ ọbara ọ bụla, ma ọ bụ ọbara ọbara ọcha ma ọ bụ ọcha, na-emepụta site na ụmị ọkpụkpụ. Mkpụrụ ndụ ndị a na-amalite na-enweghị ihe ọ bụla iji wepụta àgwà onye ọ bụla ma ghọọ ọbara uhie uhie (mkpụrụ ndụ oxygen) ma ọ bụ mkpụrụ ndụ ọcha (mkpụrụ ndụ nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ). Ugbua ka ugbua di n 'ugbua n'ime ocha nkpuru ocha (nke a na-akpọkwa leukocytes), nke ekewawara n'ime uzo isi okpukpu anọ:
Mee ka mgbochi ike
Mgbe ọ bụla sel T ma ọ bụ B na-arụ ọrụ n'ihi onye mwakpo, ụfọdụ n'ime mkpụrụ ndụ ndị a na-aghọ mkpụrụ ndụ nchekwa. Ya bụ, ha na-etinye "ncheta" nke ụdị antigen ahụ nke jikọtara ya na onye mwakpo ahụ nke mere na n'oge ọzọ na-esote otu antigen ahụ, usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ nwere ike ịza ngwa ngwa.
E nwere ọtụtụ ihe na-emetụta ọkwa nke mmeghachi omume na-enweghị ike ịchọta. Ndị Genet na-arụ ọrụ. A na - amụrụ ụfọdụ mmadụ na usoro siri ike karịa ndị ọzọ. Nri, ibi ndụ na gburugburu ebe obibi nwere ike ịmezi ma ọ bụ mebie usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Tụkwasị na nke ahụ, ike nke nzaghachi ahụ na-adịghị na ogologo oge ncheta ahụ na-emetụta ọtụtụ ụdị antigene gụnyere, na ego nke dị n'ime ahụ.
Mgbe a mụrụ anyị, usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ adịghị ike; o nweghi nsogbu o nwere ike anyị nwetara n’aka nne anyị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, na-eche na ị na-enye nwa ara, ọgụ a na-amalite ịmalite. “Mmiri ara ehi” mbụ anyị nyere nne anyị bụ n’ezie, mmiri ara ehi. Ọ bụ ihe a na-akpọ colostrum, isi ebumnuche ya bụ ịkwado ọgụ anyị. A na-eji ụyọkọ nke anụ ahụ na-ejikọ ihe dị ka lactoferin, alkyglicerols, na ihe na-agbanwe agbanwe. Ọzọkwa, inye ara ara na-enyere aka ịtọlite ​​ọdịbendị probiotic na eriri afọ, nke na-enyekwa aka iwulite sistemụ ahụ anyị ji alụso ọrịa ọgụ.
N'ime amamihe dị ukwuu nke nkà mmụta ọgwụ nke oge a, anyị mepụtara ọgwụ ndị a iji "na-echebara echiche tupu oge" maka usoro mgbochi anyị - icheta ọrịa ndị dị mkpa anyị na-enwetatụbeghị dị ka measles, mumps, polio, diphtheria, kịtịkpa, wdg. Ogwu a nwere ihe ndi na-edoghi aru nke umu microinganisms (ma obu ndi na-edozi nke umu microorganisms) ndi nwere ike ime ihe n'anyere aru n'enweghi mmetuta nke oria o bula. Ọ bụ ezie na ọgwụ ndị ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa n'inyere aka belata ọnụ ọgụgụ ọnwụ n'etiti ụmụ, uru ndị a na-enweghị ụgwọ.
• Ọgwụ ogwu polio nke e nyere ụmụaka na 50 na 60 afọ abụghị dịka ọgwụgwọ dị ka echere na mbụ. N'eziokwu, mgbe e mesịrị, mgbe e jiri ngwá ọrụ ule ka mma, a chọpụtara na e nwere 140 na-ebi ndụ na nje ndị mbụ nke polio vaccine. Ndien nso iketịbe? Ọfọn, otu ihe doro anya, otu n'ime nje ndị a, SV40, na-enwe mmetụta siri ike na ọrịa cancer ụbụrụ.
• Jonas Salk gbara akaebe n'ihu otu onye isi oche ndị omeiwu na ebe ọ bụ na 1961, ma e wezụga maka ikpe dị mkpa site na mba ndị ọzọ, ọ bụ Oral Polio Vaccine kpatara ọkpụkpụ polio nile.
• Na 1986, gọọmenti etiti gọọmenti guzobere otu Ngalaba Ngwá Ọrụ Mba na-akwụ ụgwọ maka mmemme na-ezighị ezi iji kwụọ ndị na-enye ogwu a ụgwọ. Ruo ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 1 agbaghawo.
• Na mgbakwunye na akụkụ "ọrụ a" nke ogwu ahụ, ogwu ahụ gụnyere ihe ndị dị ka ethylene glycol (antifreeze), formaldehyde (anụ ahụ a maara) na aluminom.
Lee, anaghị m ekwu na a ga-ewepụ ọgwụ mgbochi, naanị na anyị kwesịrị ịkpa oke ntakịrị karịa ihe a na-eme n'oge a. N'ikpeazụ, ọ ga-ekwe omume na usoro ọhụụ nke mkpụrụ ndụ ihe nketa, site n'inwe ike ikewapụ kpamkpam antigen na-ewe iwe, nwere ike ịnye ụdị mgbochi dị nchebe. Ma ruo mgbe nke ahụ mere. Nsogbu ndị ahụ nwere ike ibilite na Sistem
Nsogbu ndị nwere ike ibili bụ:
Ọ bụ ọtụtụ ndị na-awakpo usoro ihe mgbochi ahụ.
Usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-ebelata ma ghọọ onye na-adịghị ike ịwakpo.
A na-emepụta usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-efunahụ ikike ịmata onye mwakpo ma ọ bụ mkpụrụ ndụ mutant.
A na-emepụta usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma malite ihie ụzọ n'ịchọpụta mkpụrụ ndụ ahụ ike n'ime ahụ dịka ndị iro ma malite ibuso ha agha.
A na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ghara ịda mbà ma ọ bụ na ọ gaghị adị mgbe a mụrụ ya.
Site na nsogbu ndị a nile, anọ nke anọ, n'ọtụtụ ọnọdụ, na-agbanwe. Ma mgbe a mụrụ ahụ n'enweghị ikike ịmepụta ihe dị mkpa, nhọrọ ndị a na-ekwu n'ụzọ doro anya, mana ọ bụ enweghị olileanya.
Ebe ọ bụ na ebumnuche nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ bụ ịgbachitere ya megide mwakpo ma nyere aka rụzie onwe ya, ọ ka mma, ị ka mma. Iji kwado usoro a, ọ dị anyị mkpa ilebara akụkụ abụọ nke ọrụ ntinye anya nke anyị amatalarịrị:
Ọ dị anyị mkpa imeziwanye ọrụ ahụ ji alụso ọrịa ọgụ n'ozuzu ya - iji mee ka ahụ dị mma iji chebe onwe ya.
Anyị kwesịrị iji kpọmkwem (igbu / ebibi) bacteria, nje, microorganisms na ọrịa ndị ọzọ na-awakpo, iji nyere usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, dị ka ọ kwesịrị.
Ndị ọkà mmụta sayensị amarawo na ọtụtụ afọ na ọ ga-ekwe omume iji melite ọrụ nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. N'ebe a na United States, ọbịakwute bụ iji ọgwụ ọjọọ aha ọgwụ. Ihe kachasị mma n'oge a gụnyere cytokine na-atụsi ike dị ka interleukin na interferon. Ndị ọzọ nke ụwa, n'aka nke ọzọ, abanyela nso n'àgwà site n'ịchọ iji ihe ndị sitere n'okike mee:
• Na-emetụ ma na-ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ
• Na-alụ ọgụ
• Nyochaa ikike nke macrophages
• Mụbaa mmepụta T na mmepụta mkpụrụ ndụ T inyere hel
• Na-eme ihe gbasara 1 interferon na interleukin
• Na - enyere aka na mkpụrụ ndụ sel
Echinacea bụ ọrụ ebube nke ọrụ ebube. N'aka nke aka, o nwere echinacoside (ogwu ogwu, nke yiri penicillin maka mmetụta ya) nke nwere ike igbu otutu nje, nje bacteria, oria na protozoa, inye osisi a bara oke uru agwọ ọrịa na ịgwọ ọrịa. Nnyocha ahụ egosila na Echinacea bara uru maka ịgwọ oyi, bronchitis, ụkwara nta, ọrịa, wdg.
Echinacea nwekwara Echinacea, ihe dị ndụ nke na-egbochi mwakpo nke germs site na itinye aka na-eme ka anụ ahụ-dissolving enzyme, hyaluronidase, nke ọtụtụ germs mepụtara. Ọzọkwa, nchọpụta dịka nke a na-ebipụta na Ọrịa na Immunology na-egosi na Echinacea nwere bekee nke na-eme ka ikike macrophage nke ahụ nwee ike ibibi germs. Ihe omumu ndi ozo na Mahadum Munich egosiwo na ihe ndi Echinacea na-eme ka mmeputa T-cell ruo 30% karia ogwu ndi ozo eji eme ihe.
Pau d'Arco (Tabebuia heptophylla) sitere na mmiri ozuzo nke Brazil na akụkụ ndị ọzọ nke South America. Osisi a pụrụ iche na-eme ka nchekwa ahụ dịrị na ya ma nyere aka chebe ya pụọ ​​na ihe ndị na-egbochi ọrịa. E jiriwo ya mee ọtụtụ narị afọ iji mee ka ọrụ ahụ ghara ịrụ ọrụ, gbanwee, ma belata ihe ngbu na ahụ, karịsịa maka nkwonkwo. Nnyocha a egosiwo na ọ nwere onye na-ahụ maka nje bacteria, na ọ nwere mmetụta nhụgha n'ahụ ahụ dum, na-ehicha ọbara ma na-egbu nje.
The Pau d'arco na-eji na-emeso AIDS, allergies, ọ bụla ọrịa na mbufụt, anaemia, ụkwara ume ọkụ, ogbu na nkwonkwo, ọrịa mgbasi akwara, na-ewusi ọbara, megide bronchitis, nile di iche iche nke cancer, candida, afọ, cystitis, emphysema, ọrịa shuga, eczema, fistulas, mgbu, gonorrhea, hemorrhages, hernias, Hodgkin ọrịa, ọrịa imeju, ọrịa kansa ọbara, lupus, multiple sclerosis, osteomyelitis, ọrịa Parkinson, polyps, prostatitis, psoriasis, rheumatism, anụ cancer, mbọ, splin na-efe efe, agwọ ata aru, ọrịa ọnya, varicose veins, waatị na ọnyá dị iche iche.
Ụmụ amaala nke ọhịa Amazon na-eji Suma maka ọkara ma ọ dịkarịa ala afọ 300 ikpeazụ. Otú ọ dị, ọ bụghị n'ihu 1975 na Suma ka e mere n'oge 20th narị afọ ma nwalee na Mahadum Sao Paulo, Brazil.
Nnyocha nke Dr. Milton Brazzach mere kwubiri na ọ bụrụ na enweghị ọgwụgwọ, ọ na-ebelata ọrịa kansa, ọrịa shuga na ndị na-ata ahụhụ na ya, n'enweghị mmetụta ndị na-adịghị mma. Kemgbe ahụ, nnyocha e mere na [American College of Healing Arts] "American College of Healing Arts" nke Dr. Michael Tierra, onye dere akwụkwọ bụ The Way of Herbs, na-egosi na ojiji Ịga n'ihu mgbe niile nwere ike inyere aka ịlụ ọgụ ike (gụnyere ịgwọ ọrịa ike na-adịghị agwụ agwụ), gbochie oyi na nkwụsị, mee ka ọgwụgwọ dị ngwa, ịchịkwa hypoglycemia, ma mee ka ị na-enwe mmekọahụ.
Ihe na-arụ ọrụ nke Suma bụ:
• Pfaffic acid, nke na-egbochi mgbasa nke nsogbu dị iche iche cellular.
• Pfaffocides na ndị ọzọ saponins, nke na-egbochi ọrịa ndị na-aga n'ihu.
• Sitosterol osisi na stigmasterol hormones, nke na-egbochi absorption nke cholesterol ma melite ọbara.
• Alantoin, nke na-enyere aka mee ngwa ngwa.
• Nke kachasị mkpa: germanium. Suma nwere otu n'ime ihe kachasị elu nke Ge-132 nke osisi niile a ma ama.
Kedu ihe dị egwu gbasara Ge-132? Achọpụtala banyere 20 afọ gara aga site n'aka onye na-agwọ ọrịa Japanese, otu onye nchọpụta aha ya bụ Kazuhiko Asai. Aha ya nile bụ Carboxyethylgermanium Sesquioxide (ma ọ bụ Germanium Sesquioxide, nke bụ ihe dị njọ).
Dị ka ọmụmụ site Dr. Parris M. Kidd: "Nke a na umi, n'ihi ya, ọ bụ free nke isi mmetụta, nwere ike o doro anya na ụda, rejuvenate, weghachi omumu ọrụ, na-echebe megide ime ọpụpụ n'oge ime, gwọọ Burns enweghị scars, agwụcha radieshon ọrịa, weghachi anya na ịnụ ihe, dajụọ mmụọ mgbu n'ihi elu cancer, na ọrịa cancer regress n'ime izu. Ọbara ọrịa, gụnyere obi ọgụ, rịaworo, obi ọgụ na elu mmebi na-anabata nke ọma Ge-132, dị ka ịba ọcha n'anya na imeju, na ụfọdụ anaghị ekwe nke omume.
Ọtụtụ ogige ndị a chọtara na Reishi mushrooms, Maitake na Cordyceps dị iche iche dị ka ndị na-agbachitere ndị isi ike (HDP). A kwadoro njikọta nke ogige ndị a iji wusie usoro ntinye aka ụmụ mmadụ ike, yana enyemaka na ntanye ọgwụgwọ, metabolism, ngọngọ hormonal, na njem nke nri na oxygen. Site na usoro mgbochi nke mkpụrụ ndụ (T sel), ha na-enyere ahụ aka ịchịkwa mmepe nke mkpụrụ ndụ lymphoid ugbu a na ihe ndị ọzọ dị mkpa na-enweghị nchebe.
Reishi: Ihe na-akpata ọrịa carcinogenic na nhụjuanya nke Reach mushrooms bụ nke a na-akpọkarị polysaccharides. Reishi mushrooms nwere akwa ọdịnaya nke mucopolysaccharides, nke ahụ na-etinye n'ime membranes cell na-eme ka ọ na-eguzogide ọgwụ na nje na pathogenic bacteria. O yiri ka polysaccharides na-eme ka macrophages rụọ ọrụ, mkpụrụ ndụ ọbara ọcha "na-eri" nje, nje bacteria na ndị ọzọ.
Maitake: Ndị a mushrooms nwere a elu ịta nke a compound pụrụ iche polysaccharide akpọ beta glucan 1,6, nke na-eme nnyocha ugbu a kwere ka otu n'ime ndị kasị dị ike adaptogenic na dịghịzi stimulant mara. A nnyocha e bipụtara na Chemical Pharmaceutical Bulletin (1988) gosiri na Maitake nwere inhibitive uru 64% maka ọrịa ara ure ma mgbasa nke etuto ahụ na inhibitive uru 75% n'ihi na akpụkpọ cancer na agbasa nke etuto. Nnyocha nchọpụta larịị na US National Cancer Institute na Japanese National Institute of Health egosiwo kwa na Maitake wepụ na-egbu ndị mmadụ immunodeficiency virus (HIV) na mma na ọrụ nke mkpụrụ ndụ T inyeaka. Research egosiwo na Maitake akpali a dịgasị iche iche nke ụfọdụ dịghịzi mkpụrụ ndụ gụnyere macrophages, eke na-egbu mkpụrụ ndụ, Nke sel, Tc na Tdh.
Ọ bụghị naanị na ọ na-akpali mmepụta nke sel ndị a, ma ọ na-eme ka arụmọrụ ha dịkwuo mma site n'ịkwalite mmepụta nke inteleukin-1, inteleukin-2, na lymphokines. Dị ka anyị kwuworo, ndị a bụ chemicals nke ahụ na-emekarị ka ọ gbakọọ iji mee ka aru ahụ ghara ịmalite ma ọ bụ nyere aka dozie ihe ndị ọzọ. E gosiputara na Maitake nwere ọtụtụ ihe bara uru iji lụso kansa na ụbụrụ ọgụ, ya bụ:
Ọ na-echebe mkpụrụ ndụ ahụike site na igbochi ha ịghọ ndị na-egbu egbu.
Ọ na-enyere aka igbochi mgbasa ọrịa cancer (metastases).
Ọ na-ebelata ma ọ bụ na-akwụsị uto nke etuto ahụ.
Ọ na - arụkọ ọrụ na chemotherapy site n'inwe mmetụta ndị na - adịghị mma. Otu nnyocha na-egosi mbenata na 90% nke mmetụta dị iche iche nke chemo tinyere ntutu isi, mgbu, na ọgbụgbọ.
Cordyceps nwere ihe yiri nke ginseng ma jiri ya mee ka ike gwuo ma wughachi ahụ mgbe ike gwụrụ ma ọ bụ ọrịa ogologo. A na-ejikwa ya mee ihe maka ọdịda, neurasthenia, na akụrụ. Nnyocha na nso nso a site na Cordyceps extracts emewo ka protein dị ukwuu polysaccharide-na-arụ ọrụ megide ụbụrụ, ka ọ na-enye nkwalite nchekwa ahụ. Cordyceps bụ otu n'ime anụ ndị kasị ewu ewu na nkà mmụta sayensị niile nke Chinese, nakwa otu n'ime ọnụ ala kachasị ọnụ (na-efu ihe ruru $ 249 kwa kilogram).
A na-ejikarị Cordyceps agwọ nsogbu nke anụ ahụ, adịghị ike, adịghị ike usoro, nakwa maka ntachi obi nke ndị na-eme egwuregwu.
Garlic bụ otu n'ime ọgwụ kachasị mma maka nje nje na nje nje. Otu n'ime ọtụtụ ihe ndị dị na ya, allicin, bụ ọgwụ ọjọọ nke na-adịghị ka ọ na-emepụta ọ bụla n'ime nsogbu nje bacteria kasị eguzogide. Tụkwasị na nke ahụ, garlic garlic dị ọhụrụ gosiri na ọ bụ ọnyá maka ọtụtụ nje.
Garlic nwekwara ike ịmepụta ọrụ nke macrophages nke nabatara ihe ndị dị na mba ndị ọzọ, dịka nje, nje bacteria, na ememme. Na mgbakwunye, garlic na-eme ka ọrụ sel T inyere hel aka. Na garlic nwere ike ịdị irè karịsịa n'ịgwọ ọrịa bronchitis kpatara site na nje, n'ihi ihe ndị na-akpali akpali nke nnwere onwe na ike ịmechapụ ihe dị na ngụgụ. N'ikpeazụ, garlic dịkwa irè megide streptococcus na bacteria staphylococcus.
(Ihe nile banyere garlic dị mma maka eyịm.) Eyịm na garlic gụnyere ọtụtụ sulfur ogige ndị dị irè dịka ndị na-eme nje antiviral na antibacterial.
Ihe polysaccharide nke Aloe vera, acemannan, nwere ọrụ antiviral dị ịrịba ama ma na-eme ka ọgụ ghara ịdị. N'ụzọ dị mwute, ọnụ ọgụgụ nke acemannan dịgasị iche iche site na onye na-emepụta ihe ọzọ. Achọpụtara ngwaahịa ndị dị elu nke ọrụ acemannan iji mee ka lymphocytes dị na alloantigens site n'ịkwalite ịhapụ monocytes site na inteleukin-1. Tụkwasị na nke a, a chọpụtawo na ihe a na-eme ka ọnọdụ macrophage dị elu ma nwee mmetụta dị mma na CD-4, CD-8, T-4 na T-8 ọkwa.
A na-emepụta ihe ndị na-eme ka ọkpụkpụ alkyglycerols (nke a makwaara dị ka alkolxyglycerols, ma ọ bụ AKG) ma nwee mmiri ara ara, imeju, ọkpụkpụ na ụmị ọkpụkpụ. Ha na-ekere òkè dị ukwuu n'ime mmepụta na mkpali nke mkpụrụ ndụ ọbara ọcha. Ha na-enyekwa aka mee ka ụbụrụ ọkpụkpụ na-arụ ọrụ. Akpa mmetụta nke ngwa ngwa nke AKG na-enyere ahụ aka ichebe onwe ya pụọ ​​na nje virus, fungal na nje nje. AKG kachasị ike n'ime ụwa bụ mmanụ imeju anụ.
Lactoferin bụ otu n'ime cytokines nke ahụ mere. A na - achọta ya n'ebe ndị kachasị mfe ịwakpo, dịka na eriri afọ, anya, ntị, akpịrị, canal urinary, wdg. Lactoferin egosila na ya:
• na - egbochi ịba ụba nke nje, gụnyere ọrịa AIDS na ọrịa herpes, na mkpụrụ ndụ ahụ ike;
• na - egbochi uto tumo na metastasis;
• ọ na-egbu egbu nye nje bacteria na oriri, si otú ahụ nwere uru na-enweghị atụ na mgbochi nke nje na-egbu nje na nwa akwukwo n'ime eriri afọ;
• Na-eme ka ndị na-anọpụ iche.
Ihe mgbakwunye nke lactoferrin (ma ọ bụ kwalite mmepụta ya n'ime ahụ nwere probiotic) nwere ike ime ka usoro ahụ nwere ike ghara ịmalite ma / ma ọ bụ nyere aka ahụ gbakee site na ọrịa. N'aka nke ozo, idebe ohia gi n'adiri ike na-enye ahu aru aru iji meputa lactoferrin nke aka ya.
Glutathione bụ ngwongwo ihe okike nke amino acid mpempe nke dị na sel nke ahụ. Na mgbakwunye na ịbụ onye antioxidant dị ike, glutathione na-akwado nkwado nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma bụrụ isi ihe nke lymphocytes niile. N'ezie, lymphocytes niile chọrọ ogo zuru ezu nke intracellular glutathione iji rụọ ọrụ nke ọma. Ngwurugwu a na-arụkwa ọrụ nchebe dị ukwuu megide mmebi nbibi nke ụdị ọrịa na ọrịa carcinogens niile. N'ọtụtụ mmadụ, ihe mgbakwunye nri na-eme ka afọ ju ha. Otu n'ime ndị ọzọ bụ ndị na-ebute cystine glutathione na glutamyl cystine na karịsịa ngwaahịa whey.
Beta 1-3 / -16 Glucan bụ onyinye nke carbohydrate na-emekarị bụ nke a chọtara na mgbidi nke yist cell. Ọ na-arụ ọrụ site na "rụọ ọrụ" macrophages cellular.
Ọtụtụ ndị na-eche na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ bụ ihe na-aga naanị ya. Nke a bụ nnukwu ndudue. Ka anyị nyochaa usoro ihe omume Health na ngwa ngwa maka nyochaa otu usoro usoro ọ bụla si emetụta nzukọ dum.
• N'ọnọdụ dị aṅaa ka usoro ntinye gị (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-ewe ihe mgbakwunye niile na ụwa ịchọrọ) ma ọ bụrụ na ogwe gị ejiri 20 pound nke ochie feo? Otu akụkụ dị mkpa nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ aghaghị ịlụso mmetụta nke ịṅụ nkwụsị aka ọgụ. Hichaa eriri afọ gị ma belata usoro ịme ahụ.
• Nje bacteria bara uru (ma ọ bụrụ na ọ dị ugbu a) na - emepụta ọtụtụ ndị na - adịghị ahụkebe dịka Mmetụta Mmebi na Lactoferin kpọmkwem na eriri afọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, buru ezigbo probiotic ma ị ga-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ pụta site na ịba ụba nke mmepụta nke ihe dị iche iche dị ike.
• iwepụta ihe ngwugwu enzyme digestive buru ibu na-ebelata nsogbu CIC, bụ nke n'otu oge na-egbochi nrụgide nke usoro ntinye aka.
• Nri nri kwesịrị ekwesị na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dịghachi. A na-emepụta sel ọ bụla n'ime ahụ site na nri anyị na-eri. Nri oriri na-edozi ahụ na-apụta na mkpụrụ ndụ na-adịghị arụ ọrụ. Ngwunye dị mma nke vitamin na mineral na-eme ka mmepụta sel ndị ahụ na-apụtaghị ìhè mepụta.
• Omega-9 + Fatty Acid bụ modulator nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ nke na-enyere aka ịmebe usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ nke ọma ka e mepụtara ka ọ ghara ibuso onwe ya agha.
• Ọdịdị zuru oke nke antioxidants dị mma na-akwado usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ n'ọtụtụ ụzọ. Dị ka ihe atụ, were curcumin. Na nyocha nyocha, 1999, Vol. 28, 5-6 Publications, p. 291-303, na-ebipụta akwụkwọ ndị na-egosi na curcumin nwere ike iweghasị mkpụrụ ndụ ọbara ọcha ruo 50% naanị na ụbọchị 12, ọ bụghị iji 512 na-ekesa nje ahụ n'otu oge ahụ.
• Idojujujujujujujujuju na imeju ihe ndi ozo na usoro ihe ndi ozo na-eme ka imeju nwee ike imeputa ihe ndi na-egbochi ya ma wepu nje bacteria. Ichacha ọbara ya na onye na-ehicha ọbara na ịhazi ọbara pH na-enye aka meziwanye ọrụ ntanye.
• Ma, n'ezie, a na-egosiputa iji ihe ọkụkụ nke ahịhịa ndị anyị tụlere n'isiokwu a kwa ụbọchị iji mee ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dịkwuo ala, ọbụna n'ime ọgwụ ike.
Ndị na-enweghị ọtụtụ ndị ọzọ: Echinacea, Pau d'arco, Suma, Reishi, Maitake, Cordyceps
Na-ebibi ihe pathogens: garlic, yabasị, ginger, ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu, horseradish (nwa radish), apụl cider mmanya
• Ebumnuche nke uche na ntụgharị uche dị ka akọwapụtara n'isiakwụkwọ na-esonụ nwere ike ime ka ọrụ ahụ ghara ịrụ ọrụ dị ka obere oge 24. Tụkwasị na nke ahụ, iji ọgwụ akwara na-eme ihe ike nwere ike belata nhụjuanya n'anụ ahụ, na-eme ka ọ dịkwuo elu na usoro ọrụ mgbochi, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'abalị.
• Na-eburu n'uche na isi ihe ntinye maka ọtụtụ pathogens bụ site na anya, imi na ọnụ site na aka aka. Buru n'uche na aka bụ ihe ize ndụ nke nwere ike ime ka gị na ndị ọzọ (handshakes, dịka ọmụmaatụ) na-akpakọrịta na kọntaktị na ihe ndị dị ka ọnụ ụzọ na ekwentị. Ịsacha aka gị mgbe niile (ọbụna na ncha ọ bụla) nwere ike iji zọpụta usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
• N'ikpeazụ, otu n'ime isi uru nke ịmega ahụ bụ usoro kachasị mma.
Garlic Fermented - 250mg - capsules 200 - Allium sativum L.
2 ọhụrụ site na .16,90 XNUMX
Zụta € 16,90
Mbelata Capsules Gluthation - Antioxidant 500 mg - Jarrow Formulas Brand
3 ọhụrụ site na .69,90 XNUMX
Zụta € 69,90
GLUTATHION belatara 98% - ulakpụrụ nwere preursors + Vitamin C - Na-eme Ka Nguzogide Dị Ike, ...
GLUTATHION na BIO-Natural gbaa ụka + CHARDON MARIE & NAC na BIO Acerola | Immunity + Achọpụta ...
L-glutathione 500mg - belata - vegan - mbadamba 120 nke L-glutathione
Zụta € 40,95
Pur Aloé - Organic Aloe vera Pụrụ ị gelụ jel 1000ml
7 ọhụrụ site na .16,87 XNUMX
Zụta € 21,10
Oge emelitere ikpeazụ n’Ọgọst 3, 2021 11:14 nke ụtụtụ
Maradona, un kid en or - Akwụkwọ (2006)
Igodo nke nrọ maka nrọ dị ka akwụkwọ nrọ nke Ijipt